के विवाह गर्नैपर्छ ? नगर्दा के हुन्छ ? — Bhugolnews
के विवाह गर्नैपर्छ ? नगर्दा के हुन्छ ?
हरेकजसो समुदायको आ-आफ्नै विवाह संस्कार छ । अर्कोतिर हामी व्रम्हाचार्यको पनि कुरा गर्छौं । यो भनेको विवाह तथा कुनैपनि किसिमको मैथुन क्रियाबाट पूर्णत अलग गरेर रहने जीवनशैली हो । त्यसैले विवाह गर्नैपर्छ भन्ने धारणमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।